Afhayeenka Al-shabaab oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dad aan waxba galabsan lagu laayo Muqdisho |
Afhayeenka Al-shabaab oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dad aan waxba galabsan lagu laayo Muqdisho
Af hayeenka guud ee Alshabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo Shir Jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Xasuuqii ay malintii shaleey u geysteen dhalinyaro soomaaliyeed ee lasoo dhaafay lagu hayay dhalinyarada Muqdisho uu yahay Murug iyo Calool xumo aan laga aamusi Karin.
Wuxuu ku dheeraaday ka hadalka Ardayda Waxka Baranaysay Jaamacadaha iyo Iskuulada ee Ciidanka DF-ka ay toogteen kadibna Meydadkooda waddooyinka soo dhigeen.
“Waxaan shacabka Muslimiinta uga Tacsiyadeynaynaa Xasuuqa lagu hayo ubadkooda,lagu hayo culimada iyo dumarka,reer Muqdisho waxa idinku dhacaya waa wixii aan marar badan idinka digi jirnay”ayuu yiri Sheekh Cali.
Xarakada Al Shabaab waxay sheegtay in waxa magaalada ka socda aysan weligeed magaalada ka dhicin,“Waa wax aan weligeed soo marin shacabka magaalada Muqdisho,Carruurtoodi jaamacadaha iyo iskuulada aadaysay ayaa inta la aruursaday Xabsiyada lageeyay oo la yiri lacag bixiya markii ay bixi waayeene inta la xasuuqay ayaa meydadkooda guryahooda loosoo dhigay” Sheekh Cali Dheere.
“Ari Ciid Araffo camal ayeey u bireeyeen wiilal isku ehel ah. Arintaas meel ay dunida kajirto lama sheegin. Dadka reer Muqdisho waxaan farayaa in ay iska celiyaan gaalada iyo daba dhilfyada”, sidaa Cali Dheere ayaa shirkiisa Saxaafadeed ku sheegay.
Laba habeen oo lasoo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay min afar qofood oo laga soo bixiyay xabsiyada Nabad Sugidda kuwaas oo si arxan darra ah madaxa looga toogtay taas oo sababtay in si sahal ah lagu garan waayo.